Ny fanavaozana ny fisainana kritika any amin'ny sekolin'i Saudi Arabia dia misy fizahan-tany
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny fanavaozana ny fisainana kritika any amin'ny sekolin'i Saudi Arabia dia misy fizahan-tany
Janoary 1, 2019
Ny praiminisitra Saodiana Mohammed bin Salman's 2030 dia manana vina izay misy ny fanavaozana hampihenana ny fiankinan'i Saudi Arabia amin'ny fidiram-bolan'ny solika amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny sehatry ny toekarena sy ny serivisy ho an'ny daholobe toy ny fanabeazana, fahasalamana, fotodrafitrasa ary fizahantany.
Ny mpanabe Saodiana dia nanomboka fiomanana hampahafantatra ny fandalinana ny filozofia amin'ny sekolin'ny fanjakana. Miara-miasa amin'ireo manam-pahaizana britanika, dia nanomboka nanofana mpampianatra 200 izy ireo izay hampianatra ny mpianatra amin'ny lisea ny lohahevitra iray izay norarana tsy ho fandaharam-pianarana nandritra ny am-polony taona maro.
Ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena Saodiana Ahmad al-Issa dia nanambara ny fandraisana andraikitra tamin'ny fiandohan'ity volana ity tamin'ny fihaonambe iraisam-pirenena natao tao amin'ny firenena Sunni-Silamo mpandala ny nentin-drazana.
“Hamboarina ny fandaharam-pianarana any amin'ny lisea ary hambara tsy ho ela ny fivoarana vaovao. Hampiditra eritreritra fitsikerana izy ireo satria fiezahana hampiditra fitsipiky ny filozofia amin'ny sekoly ambaratonga faharoa. Izany dia ankoatry ny fampianarana momba ny fitsipiky ny lalàna izay hatomboka tsy ho ela ”, hoy i Issa nandritra ny hetsika.
Ny mpandinika sasany dia nidera ny fampidirana filozofia tao amin'ny efitranon'i Saudi Arabia, fanampiny iray izay iadanan'izy ireo fankasitrahana ny fandaharam-pianarana bin Salman izay mifantoka betsaka amin'ny fampianarana nomerika sy ny lohahevitra STEM (siansa, teknolojia, injeniera ary matematika).
Ny sasany, na izany aza, dia tsy mino ny tena dikan'ny "filozofia" na "fisainana mitsikera". Ny ahiahy iray dia ny fampianaran-tsaina filozofia amin'ny fomba manamafy ny foto-pinoana.
Dhari Salman, mpampianatra Koesiana, dia nilaza tamin'ny The Media Line fa nanao fandrosoana lehibe ny fanjakana tamin'ny fampidirana filozofia. "Saingy diso hevitra ny Saodiana raha tsy miraharaha ilay elefanta lehibe ao amin'ny efitrano izay fomba fijery ara-pinoana an'io lohahevitra io," mahafeno ny fepetra izy. "Fahita teo amin'ireo loholona mpandala ny nentin-drazana ny fiheverana ny filozofia ho fitaovan'ny devoly fa tsy fomba fisainana malalaka."
Ny mpianatra, hoy i Salman nanazava, dia tokony hampianarina filozofia roa lehibe: ny lojika sy ny fisainana kritika. "Mila mianatra mametraka ny fahamarinan'ny fanambarana miantehitra amin'ny saina izy ireo. Ny fitsikerana dia fitaovana iray nanampy ny saina lehibe indrindra hieritreritra ivelan'ny boaty. Ny ankamaroan'izy ireo dia nanana fahaiza-manao sy fampianarana mety amin'izany, ary ny sekoly dia tokony hanome lalana ny mpianatra amin'io lafiny io. ”
Ny olana anefa dia ny “teolojia no olana lehibe indrindra amin'ny andavanandron'ny olom-pirenena Saodiana hatramin'ny nahaterahany. Ary raha sendra fitsikerana ny fomba fijery silamo amin'ny politika sy ny fiaraha-monina ao an-dakilasy izy ireo dia mety hisy ny fifandirana mafana. "
Nanomboka tamin'ny taona 1960, Sheikh Abdel-Aziz bin Baz sy ireo manam-pahaizana momba ny fivavahana Saodiana tena hajaina dia namoaka "fatwas" maromaro (fanapahana Silamo) mandrara ny fampianarana filozofia any an-tsekoly. Noheverin'izy ireo ho "heretika" sy "ratsy" ity lohahevitra ity - fandrahonana ho an'ny andrin'ny fiarahamonina.
Edward Flood, mpanabe amerikana nonina sy niasa tao Arabia Saodita nandritra ny 30 taona mahery, dia nilaza tamin'ny The Media Line fa ny "'rafitra filozofika' an'ny fanjakana — raha tianao ny hiantsoana izany - dia miorina amin'ny Koran sy ny fampianaran'ny Silamo Wahhabi.
“Ny rafitra dia tsy mamporisika ny fisainana malalaka na fitsikerana. Fa kosa mampiditra ny fankatoavana andiam-pitsipika fanta-daza sy ampiharina tsara, tamin'ny fotoana iray, ny polisy ara-pivavahana, izay nanjary tsy nanan-kery intsony i MbS [bin Salman] nefa mbola manome hery ara-tsosialy matanjaka hatrany raha ny fitondran-tena no voakasik'izany.
"Novakiako fa ny fampianarana," hoy ny fanazavan'i Flood, "dia homena mpampianatra, fa iza kosa no hampianatra azy ireo ary, ny tena zava-dehibe, iza no hifantina ireo mpampianatra? Misy olona na vondrona sasany hanana fahefana lehibe rehefa 'mamolavola' saina Saodiana. Ary raha miresaka amin'ny maha-mpanesoeso ahy mafy dia mafy aho, efa nahalala hevitra maro toy izany izay noraisina tamim-pankasitrahana tokoa, nefa avy eo nanjary tsinontsinona noho ny karazan-javatra rehetra. ”
Nanatsoaka hevitra i Flood fa raha ny filozofia dia ampianarina amin'ny fomba mety eritreretin'ny Tandrefana iray, dia manana ny fahafahany manova ny fanabeazana saodiana sy ny fiaraha-monina. "Saingy tsy azo ihodivirana izany ary hitarika amin'ny fanotaniana ny governemanta sy ny fomba fanaovan-javatra ao amin'ny fanjakana, sosokevitra mampidi-doza ho an'ny fianakavian'ny mpanjaka."
Fatima al-Matar, mpampianatra lalàna ao amin'ny oniversiten'i Koety, dia nampita ihany koa ny fisalasalana momba ny filozofia fampianarana amin'ny tontolon'ny Silamo, amin'ny ankapobeny ary Arabia Saodita manokana.
"Amin'ny faritra izay heverina ho fahamarinana tanteraka ny Kôrana, ny lalàna faratampony, ary ny hany torolàlana mankany amin'ny fomba fiaina marina, inona no dikan'ny filozofia?", Hoy izy nanontany tamim-piteny.
“Mipetraka any Koety aho, firenena manana rafitra ara-tsosialy, politika ary fanabeazana tena mitovy amin'ny an'i Saudi Arabia, tafintohina aho rehefa namaky tao amin'ny boky fampianarana Islamo zanako vavy 12 taona fa tsy manana fahalalahana mamaky na inona na inona ny silamo iray izy na tsia. ”
Raha ny eritreritra, ny kolontsaina na ny fomba amam-panao tandrefana, nomarihin'i al-Matar, matetika ny Silamo Arabo dia matahotra ireo hevitra vaovao izay mety hiteraka fahaverezan'ny mombamomba azy ireo.
“Manakivy azy ireo tsy hijery mihoatra ny zavatra efa inoany izany. Ary raha misy ny filozofia dia, araka ny hevitro, ny fahasaharana hihoatra ny efa fantatry ny olona iray. ”